July 2021 - Channel Lover
နောက်(၇၂)နာရီအတွင်း မိုးကြီးမယ့်ဒေသများနှင့် မူးရေ၊ မြစ်ရေကြီးမယ့် သတင်း
July 31, 2021 by Channel Lover
နောက် ၇၂နာရီအတွင်း မန္တလေးတိုင်းနှင့် မုံရွာခရိုင် ရွှေဘိုခရိုင်ကန့်ဘလူခရိုင် ကောလင်းခရိုင် မိုးတွေများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် ၂၀၂၁ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေမှ ၅ရက်နေ့အတွင်း ဂွကျိန္တလိ ငပလီ သံတွဲတောင်ကုတ် အမ်း မအီ ကျောက်ဖြူ ရန်းဗြဲ မာန်အောင် မိုးကြီးနိုင်ပြန်ပါတယ် နောက် နှစ်ရက်အတွင် မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ် မိုးများနိုင်ပြန်ပါတယ် မူးရေ၊ မြစ်ရေကြီးနိုင်လို့ အားလုံးသတိထားကြပါ နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့ ညနေ (၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေအားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွင် နေရာကွက်ကျား၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ … Read more
ကိုဗစ်ကြောင့် ၀ါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ကြွေလွင့်ရပြန်ပြီ
ကိုဗစ်ကြောင့်ပဲ နောက်ထပ် အနုပညာရှင် ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးခိုင်တင် ကွယ်လွန် ကြားရတဲ့ သတင်းတွေကတော့ မကောင်းပါဘူး အနုပညာရှင်တွေ အတတ်ပညာရှင်တွေ ပြည်သူတွေလည်း တစ်ဖြုတ်တစ်ဖြုတ် ကြွေ နေရပါပြီဗျာ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်နေပြန်ကောင်းမှ ဖြစ်မှာပါ… ဦးတင်ခိုင်တစ်ယောက်လည်း ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ.. ပြည်သူတွေလည်း ဂရုစိုက်ကြပါ နော်… ယနေ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးခိုင်တင် ကွယ်လွန် 😢 အသက် (၆၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးခိုင်တင်သည် ယနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (၃၀-၇-၂၀၂၁) Unicode ကိုဗဈကွောငျ့ပဲ နောကျထပျ အနုပညာရှငျ ပနျးခြီဆရာတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဦးခိုငျတငျ ကှယျလှနျ ကွားရတဲ့ သတငျးတှကေတော့ မကောငျးပါဘူး အနုပညာရှငျတှေ အတတျပညာရှငျတှေ ပွညျသူတှလေညျး တဈဖွုတျတဈဖွုတျ ကွှေ နရေပါပွီဗြာ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျနပွေနျကောငျးမှ … Read more
ငလျင်လှုပ်တဲ့ နိမိတ်ကြောင့် အရေးတော်ပုံအောင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဗေဒင်ဆရာမတစ်ဦး
ချစ်သောသူများ မနေ့က ငလျင်လှုပ်တာကို နက္ခတ်နဲ့ရော၊အင်္ဂဝိဇ္ဇာအရရော၊ဂြိုဟ်ပိုင်စိုးမှုအနေနဲ့ရော ထောင့်စုံကနေတွက်ကြည့်တဲ့အခါ ပြည်သူ့အောင်ပွဲနမိတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရက်က ၂၉ . ၇ .၂၀၂၁ ၊ ဖုသျှနက္ခတ်စီးပြီး စနေဂြိုဟ် ပိုင်စိုးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်က ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၃နာရီနဲ့ ၁၀ မိနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂဝိဇ္ဇာအခါကို ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဓမ္ဓာစြင်္ကာတရားဟောသောအခါမိပါတယ်။ ဒီနမိတ်ဟာ ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့အတွက်ကောင်းသောနမိတ်လို့ပဲဆိုရပါမယ်။ ငလျင်လှုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အခါက တိုင်းပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး သဒါကျသလိုပဲ ရေအခါကျနေပါတယ်။ရေဓါတ်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဗုဒ္ဓဟူးရေဓါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိရောက်ခြင်းရှိစေပါတယ်။ အာပေါဓါတ်ကတော့ အေးချမ်းခြင်းကိုဆောာင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြည့်ဝခြင်းအခါလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဆန္ဒပြည့်ဝပြီး အေးချမ်းမှုကို ကြုံရပါလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စနေကိုလေ့လာကြည့်သောအခါမှာ အခြေခံလူတန်းစားများနဲ့ တိုင်းသူပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငလျင်ကျမ်းမှာတော့ ဝါဆိုဖြစ်တဲ့အတွက် မင်းပြောင်းမင်းလွှဲဖြစ်စေမှာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဟူးဒသာထဲမှာရှိနေပါတယ်။ … Read more
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ အဆုံးအမဩဝါဒ
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ အဆုံးအမဩဝါဒ (၁)လူ့လောကမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးမှန်သမျှ ကိုယ့်ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အားလုံးရဲ့ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် (ကံကြီးသူ၊ဉာဏ်ကြီးသူအချို့မှအပ) အားလုံးခံကြရတယ်။ (၂)ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံက အင်အားမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘေးဆိုး ကပ်ဆိုးကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူး။ မီးအားကောင်းနေရင် ပက်တဲ့ရေသာ ခန်းသွားမယ်၊ မီးမငြိမ်းဘူး။ (၃)ရေများ ရေနိုင်၊ မီးများ မီးနိုင် ဆိုသလိုများရာက အားသာမှာပါ။ကောင်းကံ ဆိုးကံဆ်ိုတာ ရေနဲ့မီး လိုပါပဲ။ (၄)ကံတရားရဲ့သဘာဝကို စဉ်းစားနိုင်ရန်လယ်တီဆရာတော်ရေး ပရမတ္ထဒီပနီမှအနှစ်ချုပ်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် (၃၁၊၇၊၂၀၂၁) ကျေးဇူးတော်ရှင် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ အဆုံးအမဩဝါဒကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ unicode ကြေးဇူးတျောရှငျ ပါမောက်ခခြုပျ ဆရာတျောကွီး ၏ ၂၀၂၁ … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ(၁)ရက်မှ (၇)ရက်နေ့ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်၂၀၂၁ သြဂုတ်လ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တတိယလှိုင်းကို အံတုရင်ဆိုင်နေရသော မိုးစက်မိုးပေါက်များကြားမှ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းလှသည့် မိုးတွင်းကာလ သြဂုတ်လ၏ နေ့ရက်များ ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း ) ၏ နေ့စဉ်ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများကို နားဆင်လိုပါက တယ်လီနောဖုန်းနံပါတ် (၃၀၄၃) ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ ( တစ်ပတ်လျှက် ၃၁၅ ကျပ် ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခပါပြီး ) … Read more
ပွဲအပြီး အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ နှလုံးသားက ထွက်ကြလာတဲ့ စကားသံများ(ရုပ်သံ)
ပွဲအပြီး အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ နှလုံးသားက ထွက်ကြလာတဲ့ စကားသံများ ” ဒီပွဲ မထိုးခင် သူပြောထားတာ က ကျနော်က သူ့ကို ကြောက်နေတယ်တဲ့လေ။ ဒါကြောင့်မို့ လုံးဝ မကြောက်ဘူး ဆိုတာ ပြချင်လို့ အစောစောစီးစီး ဖွင့်ထိုးတာ ၊ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း မှာ ကျနော် ကြောက်တဲ့ ဖိုက်တာ တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး” Q – ပွဲပီးတော့ ဥက္ကဌကြီး ချတ်ထရီဆီ သွားပြီး စကားပြောတာတွေ့လိုက်တယ်နော် ဘာတွေ ပြောတာလဲ? “ကျနော်ပြောတာက ကြိုက်တဲ့ ကောင်နဲ့ ပွဲထပ်ပြီး တည်လို့ရတယ်။ ကျနော် ချန်ပီယံ ဖြစ်နေတုန်းကတော့ စိန်ခေါ်တဲ့လူတွေက အလျိုလျို ပေါ်လာကြတယ်လေ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဝယ်တာဝိတ် ချန်ပီယံ အဘာဆော့ ကတောင် စိန်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ … Read more
“ဆရာတော်ထံ ကျပ်သိန်း(၃၀၀) နေအိမ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အဘွား”
“ဆရာတော်ထံ ကျပ်သိန်း(၃၀၀) နေအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အဘွား” ဦးကျော်မြ+ဒေါ်ချို အုန်းတောရပ် မော်လမြိုင်မြို့မှ ရွှေမြင့်မိုရ်ဓမ္မနန္ဒီ ဆရာတော် အလိုရှိရာ အသုံးပြု စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် နေအိမ်တစ်လုံးနှင့် နေအိမ်အတွင်း ပစ္စည်းများ ၊ ငွေကျပ်သိန်း (၃၀၀) ၊ ရွှေထည်ပစ္စည်း (၂၅) ကျပ်သား တို့ကို အပြီးအပိုင် လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ သာဓု သာဓု သာဓု ပါအဖွားရေ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းရသော အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ရောဂါဘယ ကင်းဝေးပြီး သက်ရှည်ကျန်းမာစွာဖြင့် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ အားလုံးသော ပြည်သူတွေလဲ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံး နတ်လူ သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ… unicode “ဆရာတျောထံ ကပျြသိနျး(၃၀၀) နအေိမျနှငျ့ ပိုငျဆိုငျမှုမြားအားလုံးကို လှူဒါနျးလိုကျတဲ့အဘှား” ဦးကြျောမွ+ဒျေါခြို … Read more
ဇူလိုင်(၃၀)ရက်မှ သြဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံနိုင်သည့် ဒေသများ
၂၀၂၁ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့မှသြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့အတွင်း ဟုမ္မလင်းထမံသီနန်းယွန်းခန္တီး လဟယ် နှင့် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူပ်ခွင့်ဒေသ ဆွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံဖြစ်နိုင်ပြီး သဖန်ဆိပ် ရေဝင်ဧရိယာ ဖြစ်တဲ့ ပင်လည်ဘူး ဝန်းသို ကောလင်းဗန်းမောက် ဒေသများတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းနိင်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ်မှာ မိုးတွေကြီးနေနိုင်ပါသေးတယ် အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ … Read more
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပွဲ အပြီးမှာ ပြောပြသွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ပြောကြားချက်
July 30, 2021 by Channel Lover
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပွဲ အပြီးမှာ ပြောပြသွားတဲ့ အောင်လအန်ဆန် သူ့ (လီယန်ဒရို) ရဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်က သူနဲ့ချဖို့ ကြောက်နေတယ် ဆိုပြီး ပြောဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်ဘူး ဆိုတာကို ပြချင်ခဲ့တာ။ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကတော့ ကြိုက်တဲ့သူ လာခဲ့။ ကျွန်တော် ဘယ်သူမှ မကြောက်ဘူး။ ပွဲပြီးတော့ ချက်ထရီကို သွားပြောတာက ကျွန်တော် ဘယ်ချန်ပီယံနဲ့ မဆို စိန်ခေါ်ထိုးဖို့ အဆင်သင့်ပဲလို့ ပြောခဲ့တာ။ ကျွန်တော်နဲ့ ထိုးချင်တယ်လို့ ပြောဖူးတဲ့ ချန်ပီယံတွေ ရှိတယ်။ ဝယ်လ်တာဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ အဘာဆော့က တောင် ကျွန်တော်နဲ့ ထိုးဖို့ စောင့်နေတယ်လို့ တစ်ခါ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ ဘယ်သူနဲ့မဆို ထိုးဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။ … Read more
အောင်လပွဲ မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေ အတွက် တိုက်ရိုက် Live လေး ပြန်တင်ပေးပါတယ်
ယခုယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲကြီး တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ တိုက်ရိုက် Live ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ စာကတော့ အရင်စာတေ ပြန်ထည့်ထားပါ ဒီနေ့ညမှာ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့် အောင်လပွဲကို ဒီမှာကြည့်လို့ရပီနော် အောင်လအန်ဆန်နဲ့လီအန်ဒရိုအာတိုင်းဒီးစ်တို့ပွဲ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ အခုပဲ ပြိုင်ပွဲကြီး စတင်နေပါပြီဗျာ မြန်မာ့စပါးအုံးကြီး အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံသား လီအန်ဒရိုအာတိုင်းဒီးစ်တို့ကတော့ လာမယ့် July 30 ရက်နေ့မှာ One Championship ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်လုခွင့်အတွက် ထိုးသတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပွဲကတော့ မြန်မာစံတော်ချိန် 30 ရက်နေ့ ည7နာရီလောက်မှာ စမှာပါ။ အောင်လတို့ပွဲက Co-main event ပွဲဖြစ်ပြီး ရှေ့မှာ သုံးပွဲလောက်ရှိတာကြောင့် ၈ခွဲ ၉ နာရီလောက်မှလာပါမယ်။ … Read more